Ny soavaly Zaino: inona izany, toetra sy karazany isan-karazany | Soavaly Noti
The term kitapo misy dikany maromaro, fa ny mahaliana antsika dia ilay vola ny teny saḥim avy amin'ny Arabo Andalusianina ary sāḥim avy amin'ny arabo mahazatra inona no tian'izy ireo holazaina 'izay mainty tanteraka'. Ity mpifaninana ity dia ampiasaina amin'ny soavaly sy ho an'ny omby misy loko palitao mampiavaka azy: volontsôkôlà mainty raha ny teo aloha sy mainty amin'ny tranga misy azy, miaraka amin'ny mampiavaka azy fa tsy tokony hisy loko hafa, na dia kely aza.
Ok izao Tahaka ny ahoana ny soavaly Zaino? Io ilay Izy io dia miavaka amin'ny fananana pigment ny hoditra amin'ny loko volondavenona sy ny lava, ny rambony ary ny tendrony mainty (Amin'ny fiafarany dia manondro ny ampahany amin'ny rantsam-batana manisa hatramin'ny lohalika sy ny club midina isika). Ny lohany sy ny lambany dia misy a mifangaro mifangaro volo mainty sy mena izay ny isan-jato no hamaritra ny iray na ny karazany hafa ny soavaly chestnut, manomboka amin'ny maivana indrindra: ny chestnut volamena, hatramin'ny maizina: ny chestnut mainty.
Ahoana no ahitantsika ny chestnut dia karazana volom-borona, ary tsy izany ihany fa a ny tena fahita sy fantatra satria nandritra ny tantara Equine, niparitaka nanarona firazanana samihafa ireo bay samy hafa amin'ny kilasy, ny bika, ny karazany ary ny toetrany. Amin'ny tranga farany dia mahita rantsana telo miavaka isika: ra mangatsiaka, ra mafana ary ra mafana. Ny olona mangatsiaka dia mazàna somary sariaka ary sady matahotra ihany; ireo izay manana rà mahonon-tena dia manana hakingana sy tanjaka lehibe, raha ireo izay manana rà mafana, izay amin'ny ankapobeny dia avy any Arabo sy Espana, dia mitaintaina noho ny toetra amam-panahin'izy ireo.
1 Palitao Equine
2 Zaino karazana soavaly
Lafiny iray miavaka amin'ny kolotsaina soavaly ny volom-borona, izay afaka mampita fampahalalana fototra momba ilay biby, toy ny fandrefesana ny fahasalamany na ny fanombanana ny fahafahany manompo olombelona.
Amin'ny volony no tianay holazaina amin'ny napetraka noforonin'ny volon'ny vatan'ny biby, ny mana ary ny rambony. Ny mamaritra ny lokon'ny akanjo vita amin'ny soavaly dia pigment roa vita amin'ny melanocytes (sela apetraka ao amin'ny dermis izay mahatonga ny loko izay manome loko ny hoditra sy ny volo) ary noho izany dia tompon'andraikitra amin'ny volon'ny palitaon'ny soavaly izy: eumelanin, loko mainty na volontany, ary pheomelanin, loko mena na mavo. Ireo feo ireo, antsoina hoe fototra, dia manjary maizina sy mitovy fanamiana, ary avy amin'izy ireo dia misy karazan'endrika hafa rehefa mihetsika ireo fototarazo, ka manjary maivana kokoa ireo palitao fototra ireo; ohatra tsara amin'izany dia palitao perla na champagne. Ny tsy fisian'ireo pigment roa voalaza etsy ambony ireo, na feno na ampahany, dia miteraka albinos ary albinoïde tsirairay avy, noho izany ny teboka fotsy tsindraindray amin'ny palitao fototra dia tsy isaina ao anaty palitao ihany.
Horse Zaino Colorado may ary Albinoid Horse
Tamin'ny taonjato faha-XNUMX, ireo mpifaninana dia nanolotra fahasamihafana lehibe amin'ny resaka palitao, zavatra iray izay nihena tsikelikely noho ny fifantenana sy ny fiampitana miaraka amin'ireo biby tsara izay mazàna manome loko voafaritra, toy ny chestnut.
Mba hahatongavana amin'ny mampiavaka ny palitao chestnut dia ilaina ny fananana a Gen antsoina hoe Agoutí, anarana iray izay avy amin'ny palitao mena an'ny soavaly taloha, na dia marina aza fa manamafy ny mpanoratra sasany fa amboadia sy mandady ny razana. Ity génie ity dia a manjaka izay manangona ny volo mainty rehetra amin'ny tendrony, fanja ary rambon'ny ekipa.
Ny palitao chestnut mahazatra indrindra dia ilay mihazakazaka mifanaraka amin'ny lamosin'ny soavaly izy, mamela ny kitrokeloka, ny vava, ny rambony ary ny mane ho an'ny alokaloka hafa toy ny fotsy mainty na volondavenona. Matetika izy ireo dia misy teboka kely misy loko fotsy sy mainty miorina amin'ny tendrony sy ny vava.
Ao anatin'ny helodrano dia ahitantsika karazana volom-borona hafa ahafahantsika manasokajy azy ireo.
Zaino karazana soavaly
Heverina ho toetra mulatto, izay ahitana loko volontsôkôlà sy mena ny lokony ifotony, afa-tsy ny feo mainty na mainty volondavenona amin'ny kitrokely, rambony, molotra ary kitrokely, Mora kokoa ny mamantatra fa ny soavaly dia chestnut noho ny famakafakana ny niandohana na ny karazany manokana izay nilaza fa manome biby. Tsarovy fa ny soavaly chestnut dia samy manana ny mampiavaka azy satria ny karazany maro no manana an'io karazana palitao io.
Nandritra ny folo taona farany ny fandrosoana eo amin'ny sehatry ny génetika dia niavaka kokoa eo amin'ny sehatry ny soavaly, famakafakana ny rafitra fampifangaroana ny fototarazon'ny firazanana samihafa, ny palitaony ary ny fanasokajiana ireo izay tsy fantatra.
Ny fototarazo dia nozaraina tamin'ny fotoana niasan'ny zanak'alika, izany dia iray amin'ireo antony mamaritra ny lokon'ny palitao soavaly. Izy io koa dia misy akony eo amin'ny maha-recessive na dominant, matetika ireo fototarazo manjaka dia ireo manana loko maizina kokoa toy ny mainty na volontany manohitra karazana pigmentation hafa toy ny mena sy mavo.
Chestnut zaino, reny ary zanak'omby
Ny fandinihana natao tamin'ity sehatra ity dia nahafahana namorona rejistra izay misy ny anton-javatra toy ny palitao, ny karazany, ny toetrandro ary ny fahaizany mampifanaraka. Miresaka soavaly soavaly, ny ampahany mahaliana antsika indrindra dia ny voalohany, ny volony, aiza Hitanay ny fanasokajiana kely miaraka amin'ireo karazany isan-karazany ananan'ireto soavaly ireto amin'ny resaka palitao. Ity fanasokajiana ity, izay ho hitanao etsy ambany, dia baikoina manomboka amin'ny maivana ka hatramin'ny karazany maizina indrindra.
Zaino doradillo Ireo no manana loko mavo kokoa, miaraka amin'ny volontsôkôlà somary volontsôkôlà, ny loko dia mahafinaritra ny maso.
Zaino mena mena, Izy io dia manana loko mena mainty (tan tanety), izay mihamalefaka tsikelikely miaraka amin'ny loko mavomavo misy volontsôkôlà na mavo mavo ary mavomavo mavo amin'ny faritra maro amin'ny vatana. Raha manana tongotra ny ondry dia heverina ho biby tsara izany.
Chestnut zaino, Izy io dia karazana chestnut mena manokana nomena ny fitoviana amin'ny lokon'ny akorany, anarana nolovaina avy tany Espana.
Zaino mena may, izay manana loko mena sy avo kokoa. Mainty ny rambo, ny mana ary ny kapa. Ny mpanoratra sasany dia miantso an'io karazan-tratra io ho mena mena, ny sasany kosa mihevitra fa karazany roa samy hafa izy ireo milaza fa manana feo mirehitra sy mirehitra kokoa ity farany raha ny chestnut mena may, na dia manana mena mena aza, dia maizina kokoa.
Zaino mule snout, Izy ireo dia misy volondavenona na volondavenona kokoa eo am-bavony, mahazo endrika ampondra miaraka amin'ny sigara mainty sy loko mavo. Ny fantsom-boromailala dia mamaritra amin'ny alàlan'ny fanalefahana ary mampiavaka kokoa ny tarehy tahaka ny an'ny zaino malacara izay mety hitranga amin'ny karazana palitao rehetra (amin'ny chestnut dia misy ambonin'izany rehetra izany amin'ny chestnut mena sy ny chestnut volamena). Ireto mampiavaka roa an'ny loha ireto dia heverin'ny mpanoratra sasany ho karazana volom-borona, na dia misy aza ny ady hevitra.
Sullen Zaino, Izy ireo no mampiseho loko mena kokoa, mamaritra ny loko mainty misy volo kely volontsôkôlà. Ireto karazana soavaly ireto dia tena irina ao amin'ny fiarahamonina mpitaingina soavaly satria tsara tarehy.
Kitapo kitapo, dia manana ny toetra rehetra voalaza momba an'io karazana biby io ary ny isan-jaton'ny volo mena sy mainty misandratra dia manodidina ny 50% avy.
Zaino pangaré, Io dia ny volom-bava, ny hoditra eo ambanin'ny masony, ny sandriny, ny tratrany, ny kibony, ny stifles ary ny panty misy loko voasasa (mavo kokoa), ny sisa amin'ny palitao dia zaina Miatrika karazana fanalefahana hafa isika toy ny orona moka. Ny pangaré dia mampiavaka ny palitao izay hita amin'ny palitao isan-karazany, fa amin'ny bay kosa no ahitana azy matetika indrindra, indrindra amin'ny helodrano mena sy helo volamena.
Zaino mainty, misy loko mainty, ny volo eo amin'ny lohany sy ny palitaony dia mainty sy mena miaraka amin'ny mazàna lehibe kokoa amin'ny isan-jaton'ny volo mainty, izay mampiavaka azy amin'ny chestnut mena.
Soavaly Zaino mainty
Ho famaranana amin'ny soavaly chestnut dia manonona izany ny palitaon'izy ireo dia mety haneho fiovana kely rehefa miampita karazana sasany. Afaka mampiseho, ohatra, ny albinisma sasany toy ny amin'ny overo sy tobianos; fanamafisana toy ny potika sy mihorona; rosilisma raha ny raozy sy raozy, na tordillismo toy ny amin'ny tordillo vous.
Izany rehetra izany, araka ny efa noresahintsika manoloana ny afovoan'ny lahatsoratra amin'ny endrika kapoka kely, dia vokatry ny génétika. Misy fotoana mety tsy dia manjaka loatra ny tapany misy ny soavaly soavaly, toa ny rehefa tojo soavaly an'ny purebred. Amin'ny tranga sasany ny fahasimbana kely miendrika moles dia azo zahana bitika amin'ny faritra misy vodin-tseranana ny biby. Tranga iray hafa azo avy amin'ny hazo fijaliana eo anelanelan'ny soavaly kastany sy ny zana-borosy iray, no iray toko izay ahazoana biby mongel kokoa manome teboka lehibe manamorona ny vatany manome azy ny endrika mampiavaka ny omby Holstein.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » ny hafa » Karazan-tsoavaly » Soavaly Zaino
Lalao soavaly 3D: an-tserasera sy amin'ny PC